China Ngwunye Nyere 80w China Manufacturers & Suppliers & Factory
Ngwunye Nyere 80w - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Ngwunye Nyere 80w)
Ufo anyị dị 200w na-anapụta ihe ruru 26,000 lumens. Ufo nke a na 180w meziwanye ihe oriri na ihe ọṅụṅụ ọ bụla, ọrụ ugbo na akụrụngwa, ụlọ ahịa azụmahịa na ihe ndị ọzọ! The Philips Ufo High Bay ájá dị nro na-eguzogide ọgwụ na-ehicha ma ọ bụ nkwụsị ihe nhicha na-ehicha. Naanị iwere 200W satco ufo elu n'ọnụ mmiri ,...
80W Sun Street Street na igwefoto 5000K
The 80w Sun Street Light na igwefoto bụ 5600 lumen LED na nwere size nke 1140mm * 425mm * 44mm. Nke a 80W Sun Street Ebube Ebube Ebube dị elu bụ 7-8, na okpomọkụ okpomọkụ bụ 5000K. The 80w Solar Street Light Walmart nwere oghere ndị dị n'akụkụ elu nke unit a na-enwupụta ìhè anyanwụ n'ehihie, mgbe ahụ, ndị ọkụ...
Kwapịa Ngwunye Linear nke 60W Nwepụta Ntugharị Ndagharị
2ft ogologo 60W Led Linear Lighting Solutions with 7800 lumens very bright, Save energy of over 50%! The 60w Dugara Linear Retrofit Kit nwere ike bee gị electric ụgwọ na ọkara iji ọkọlọtọ 200 watt elu n'ọnụ mmiri lights.5 afọ ogologo factory akwụkwọ ikike. A na-etinye Ngwá Ọrụ Ngwá Ọrụ Ndabere nke a na Ndabere na...
Ngwunye Nyere 80w Ngwunye Nyere 80W Ngwunye Nwunye Ufo Ngwunye Nwunye Led 75W Ngwunye Nwepu Ike Ngwunye Ngwurugwu 150W Ngwunye Ngwá Agha nke 50w Ngwunye Ngwunye 200W Na-enwu